मनुसँग रातमा भएको रमाइलो चिकाई
मेरो कलेजको एक जना साथी पोखरामा बस्थी। उनको नाम मनु हो र उनि 1८ बर्षकी थिई। कहिलेकाँहि फोनमा कुरा हुन्थ्यो, कहिले नेटमा त कहिलेकाँही भेटर नै कुरा हुन्थ्यो हाम्रो। एक दुई चोटी मलाई भेट्न भनि मेरो घरमा पनि आएकी थिई। प्रायः साधारण गफगाफ मात्रै हुन्थ्यो हाम्रो। मनु पृथ्वीचोकमा भाई र बहिनी सँग बस्थी। आज भर्खर उनको बी. बी. एस.को परीक्षा सकेको छ। एकदिन म अफिसमा भएको बेला मनुको फोन आयो। मैले के कसो छ भनि हालखबर सोँधें। उनले सबै राम्रै रहेको जानकारी गराई उनका भाई र बहिनी कामको सिलसिलामा गाउँ गएको समेत बताई। अनि मैले सोधें “एक्लै बस्नु डर लाग्दैन?” उनले “लाग्दैन” भन्ने छोटो जवाफ दिई। उनले “मेरो मोवाईलको व्यालेन्स सकियो, यता १०० को रिचार्ज कार्ड नै पाईन सक्नुहुन्छ भने ल्याईदिनु होस न!” भनि। मैलेपनि “अफिसको काम सकेर लिएर आउँला” भनि जवाफ दिएँ। करिव ५ बजे तिर सबै काम सकेर म मोटरसाईकल लिएर निस्के। बाटोमा १०० को रिचार्ज कार्ड र २ प्याकेट कुरकुरे किनेर म उनको डेरा तिर लागें। गेटमा मोटरसाईकल रोकेर उनलाई मिसकल गरें, उनि ढोका खोल्न आई। भर्खर नुहाएर बसेकी रहेछिन्, कपाल चिसै र खुल्लै थियो। म सरासर उनको पछि पछि कोठातिर लागें र झोलाबाट चिप्स र रिचार्ज कार्ड झिकेर उनलाई दिएँ। “बस्दै गर्नुहोस है, म चिया पकाएर ल्याउँछु” भन्दै उनि किचन तिर लागि। म।एकछिन कोठामै बसें र पिसाब फेर्न मन लागेजस्तो भयो। यताउता नजर डुलाउदा दाहिने पट्टी साइडमा ट्वाईलेट देखेँ र भित्रै छिरे। पिसाब फेर्दै चारैतिर हेर्दा, उनले भर्खर खोलेर सुकाएको हरियो पेन्टी देखें। खोई मलाई के भयो भयो, उनको पेन्टी हातमा लिएर सुँघ्न थाले। कस्तो बासना आयो आयो मेरो भाई त ठनक्क ठुस्किएर आयो। मलाई खपि नसक्नु भयो र मैले त्यँही हस्तें हाने। त्यसपछि म बाहिर निस्के र किचन तिर छिरे।
उनी चिया गिलासमा राख्दै थिई। म उनको छेउमा बसेर हेरिरहेको थिए। “के हेर्नुभएको?” भन्दै मलाई उनले कुहिनोले धक्का दिई। मैले पनि “केहि होईन, चिया कसरी बनाउछ भनेर हेरेको नि” भन्दै उनलाई मेरो कुहिनोले उनको छातिमा धक्का दिएँ। उनले “जाऊँ कोठामै बसेर चिया खाउँ” भनि र म पछि पछि कोठातिर लागें। हामी कोठामा बसेर टिभी हेर्दै चिया खान थाल्यौं। म धेरैजसो डिस्कभरी च्यानल हेर्ने भएकोले रिमोट हातमा लिएर च्यानल बदल्न थाले। बदल्दै गर्दा टिभी फिल्मी भन्ने च्यानलमा नेपाली सेक्सी फिल्म एटिएमको प्रोमो आएको रहेछ। मैले रिमोट भुँइमा राखेर त्यो फिल्मको प्रोमो हेर्न थालेँ। त्यहाँ केटिहरु स्तनको पोका प्रष्टै देखिने पातलो लुगा लगाएर हिरोसँग टङ किस् गर्दै थिए। “छ्या कस्तो च्यानल हेर्नुभएको, अर्को लाउनु” भनेर उनले रिमोट खोस्न खोजि। मैले हतार हतार रिमोट अर्को हातमा लिएर भने “के को छ्या नि, तिमीलाई यस्तो फिल्म मन पर्दैन भनी सोध्दा उनले त्यसो हैन भन्छ। अनि मैले थपेँ पनि हालेँ, त्यसो भए मन लाग्छ त भन्दा लजाउदै च्यानल चेन्ज गर्नु भन्दै जबरजस्ती रिमोट खोस्न थाली। यसै क्रममा म खाटमा थिए, उनी मेरो माथी खप्टिन पुगि। मैले बिस्तारै उनको कम्मरमा काउकुति लगाइदिएँ। उनलाई ल धेरै काउकुति लाग्दो रहेछ। मैले “खोई काउकुति त मजाले लाग्ने रहेछ, फेरि लगाउँ” भनि उनको घाँटी तिर छोए। उनी खित्का छोडीछोडी हाँस्न थाली। मौका यहि हो भनेर उनलाई जताततै काउकुति लाउन थालें। लाउँदा लाउँदै उनको छातिको स्तनमा समेत स्पर्श गर्न पुगें। उनी केहि नभनि झन म भएको खाटमा पल्टि। “के खोज्छस् कानो, आँखो” जस्तै भयो मलाई र मैले उनलाई काउकुति लाउने बहानामा उनको सबै अंगमा एकदम इमोसनमा आएर मुसार्न थालें। सायद उनले मेरो भाषा बुझेछ क्यारे मुस्कुराउदै लजाउन थाली।
मैले अब नहिच्कीचाईकन उनको सानो नानीमा हात लाँदै उनको ओँठ र बुबु एक बर्षे बालकलेझैं चुस्न थालें। उसलाइ पनि मजा आउन थालेछ क्यार, चुपचाप आँखा चिम्लेर मात्र बसिरहि। मेरो सानो भाइ मोटाइसकेको थियो मनुको भिटामिन छि खाएर। कति खेर भाइ र बहिनी भेट गराउने होला भनी म आत्तिनु आत्तिए तर डरपनि लागिरहेको थियो। मेरा दुई हातहरू उनको बेलुन मसार्न र माड्नमा व्यस्त थियो। उनी पनि शिथिल हुन थालि। उनलाई काखमा राखेर टि-शर्ट खोलेर मिल्क्याइदिँएँ अनि ब्राको हुक पनि खोलेर नजर लगाउँदा बल्ल थाहा भयो ओहो म कति ठूलो भ्रममा रहेछु, यति मस्याउलो स्याउ जस्तो बुबु मसारिरहेर पनि बेलुन भनी ठानेको। हुनपनि आजसम्म यति भर्खरको तरुनी केटीको मस्याउलो बुबु कहिल्यै पनि खुल्ला देखेको थिइन र घोडा चढेर स्याउ जस्तो बुबु माड्दै चुस्न थाले। त्यसपछी उनलाई खाटमा सुताएँ र उनको नाङ्गो शरीर हेर्न थालें।
उनी आँख चिम्लेर मुखबाट इससस्….. आअहहह….. उफ्….फ… उमममम्…..म… जस्ता अनायासै आवाजहरु निकालेर पल्टि रहिन्। त्यसपछि मैले उनको “आ…ह..अअअ…. आह” कराइरहेको मुखमा मेरो मुख जोडीदिएँ। उनले मलाई नाम्ले किरालेझै तलबाट हलचल गर्नै नमिल्ने गरि समातिरहिन। मैले उनको मुखबाट मेरो मुखलाई छुटकारा दिन खोजे तर उनले छुट्नै दिएन बरु ओंठको छालानै फाट्लाझै गरि मेरो ओठ चुसिरही। यसरी करिब १०/१५ मिनट जति चुसिनैरही र मलाई छुटकारा दिई। अस्ति राजुको मोबाइलमा हेरेको बि. एफ. मा झै उत्सुकता पूर्बक के हुँदोरहेछ आखिर त्यसो गर्दा खेरी भनि उनको नानीको मुखमा औला घुसाउने हेतुले आफ्नो हात नानीतिर लम्ब्याएँ तर उनले बिचमै रोकेर “नाई, यो भन्दा धेरै नगर्ने” भनि। ढुन्मुनिँदै रिस पारा चढेर आएथ्यो पापी मनमा अनि आँखा देखिरहेको थिएन मैले। कुनै यौन जोडिले यति लास्ट स्टेजमा आएर यसो भने होला र मनमनै गाली गरेँ उनलाई। तर अशान्त मनलाई धेरैबेरको प्रयास पछी सम्झाएँ र सोंचे यो सुन्दर युवती जसले मेरो सन्तुस्टिका लागि आफ्नो जीवन र अस्मिता बन्धकी राखेकी छे, उनको लागि मैले केही सोच्नु पर्छ। अनि मुस्कुराउदै भने “ल ल, हुन्छ तिमी चाहदिनौ भने अरु कदम चाल्दिन भनेर म उनको बुइबाट ओर्लिएँ। रात परिसकेको थियो, म घर आउने तर्खरमा थिएँ। उनले आज एकदिन आफुसँगै बस्न अनुनय बिनय गरिन्। आखिर म उनको मुखबाट यहि शब्द सुन्न खोजिरहेको थिएँ। मैले हुन्छ भनेँ र उनी खान बनाउन भान्सा गइन्। म पनि आउँ भनी मैले उनलाई प्रश्न गर्दा उनले सोधिरहनु पर्छ र भनी हाँस्दै गई। म पनि पछि लागेर उनको हर कृयाकलाप खुब चाख मान्दै हेर्न थालें। बेलाबेलामा हाम्रो आँखा जुध्थो र उनले प्रश्न गरिन “के हेर्नुभाको?” म अक्मकिँदै केही हैन भने। “के हेर्नुभाको म अहिले पछी मुखबाट बकाएरै छोड्छु” उनले भनिन्। म के गर्लिन उनले झसङ्ग हुँदै थिएँ।
उनले त्यो दिन यति स्पेसल परिकार बनाइन् कि मैले आजसम्म फाइब स्टार होटलमा समेत खाएको थिएन। खाना खाइबरी हामी सुत्ने तरखरमा थियौँ। उनले आफ्नो कोठामा रहेको दुईवटा खाट जोडेर एउटै बनाएर आरामदायी ओछ्यान बनाई। मैले किन यसो गरेको भनी सोध्दा पछि थाहा पाउनुहुन्छ भनिन्। मेरो मनमा उनले दुईवटा परिस्थितिमा भनेको कुरा “पछी थाहा पाउनुहुन्छ” मेरो मनमा छाल बनेर उम्लिरहेको थियो। ओछ्यान बनाइसके पछी उनले सुत्न आग्रह गरिन्। म अक्मकिँदै उता फर्किएर सुत्न लागेकै बेला उनले आफुतिर फर्किन लगाइन। मैले कुरा बुझिसकेको थिएँ उनले के भन्न खोज्दै छ र भन्न सकिरहेको छैन। म पनि आफुलाई उनको नजरमा नैतिकवान साबित गर्नु थियो र कुरा नबुझेझै गरेर नै सुतिरहें। केही छिन पछि उनले किन हो कुन्नि बोल्ने निहुँ बटुल्न थालिन्। उनले मलाई भनिन “तपाईको गल्फ्रेन्ड छ?” मैले भावुक हुँदै भने “म जस्तो मान्छेलाई कसले प्रेम गर्छ र?” उनले भनिन् “कस्तो निर्मोही म गर्छु नि तपाईंलाई प्रेम गर्ने, धेरैदिन देखि भन्न खोजेको थिएँ तर डर लागेको थियो।” मैले पनि उनलाई विगत ६ बर्षदेखी चाहेको थिएँ तर भन्न सकिरहेको थिइनँ। उनका लागि देउराली भाकेको थिएँ, बल्ल आज देउराली माईले मेरो मनको पुकारा सुनेछ र मनमनै धन्यवाद पनि दिएँ। उनले मलाई के सोचेको भनी झस्काएर भनिन् “सरी! मैले तपाईंको मनको कुरा नबुझी एकोहोरो चाहिरहेँ, मलाई नराम्रो नसोंचिदिनु ल।” उनको आँखामा आँसु टल्किरहेको थियो। मैले आँसु पुछदिँदै भने किन आँसु खसालेको लाटी म पनि तिम्लाई आफुभन्दा बढी मायाँ गर्छु। उनको मुहारमा अचानक खुसि छायो र भनिन् “नट्टी ब्वाई, मलाई किन नभन्नुभाको त?” अब म संसारको सर्बोच्च शिखर सगरमाथामा भएको आभास गर्न थालें। यत्तिकैमा उनले मेरो हात समातेर आफ्नो बबुतिर पुर्र्याई र मलाई एकोहोरो हेरीरही। मैले के हेरेको भनी सोध्दा अघि हजुरले जे हेर्नुभएको थियो त्यहीँ।
म अब आफूलाई यो भन्दा बढी तर्पाउन सकिन र उनलाई पल्टाएर अघि दिउँसोझै जताततै मसाज गर्न थालेँ। मलाई अब बुबु मात्र खाएर पुगेन पापा पनि खान मन लाग्यो। मैले आफ्नो हात उनको पापातिर पुर्र्याएँ। केही छिनको कस्टपछी मेरो हात एउटा कालो बनमा पुगेछ। बनमा बाघ भालु छ कि भनेर डराउँदै हातको त्यो रमाइलो यात्रालाई निरन्तरता दिन थालें। यात्रा यति रमाइलो थियो कि, आजसम्म यस्तो यात्रा कहिल्यै गरेको थिईन। जे होस् बन त्यति बाक्लो त थिएन तर जाँदाजाँदै बिचमा एउटा सुन्दर गुफा रहेछ। लोभी यी हातहरु त्यस गुफामा प्रबेश नगरी फर्किन खोजिन र त्यतैतिर लम्ब्याएँ। गुफा अति राम्रो थियो नै त्यसको साथसाथै कुवा पनि रहेछ क्यार, पानी बगिरहेको थियो। खै मेरो भाइलाई पनि कुवा देखेर तिर्खा लागेछ क्यारे बल लगाएर दरबारबाट बाहिर आउन खोज्यो। उनले पनि मेरो भाईको मनोभाव बुझेछ, भाईलाई दरबार बाट बाहिर निकालेर मुसार्न थाली। जङ्गली जनवार केही नभएपनि खै किन हो कुन्नि हातलाई त्यो भन्दा भित्र जाने आँटै आएन। जे होस हातलाई त्यो बनबाट त निकालेँ तर मेरो भाई पनि त्यो सुन्दर गुफामा नगइ नछाड्ने भएपछी उसलाई त्यहाँ लैजाने बिचार गरें। उनले पनि भाइलाई घुम्न लाने अनुमति दिएपछि मेरो भाइ र हात सँगसँगै गयो। हातलाई भित्र छिर्न डर लागेछ कि कुन्नि भाइलाई गुफाको मुखमा पुर्र्याएछी आफू फर्कियो तर भाइ भने भित्रनै पस्यो। तर ओडार सानो रहिछ, अहिलेसम्म कोही नगएको रहेछ। तर बल गर्दै मेरो भाइ भित्र पसेपछि खै किन हो मेरा भाइ भित्र बाहिर गयो भने मेरो सारा जिउमा रहस्यमय भुङचालो आयो र तलमाथि हल्लियो। अर्कोतिर त्यो गुफामा पनि भुइचालो आएछ क्यार। त्यो पनि मेरो जिउको भुइचालोलाई साथ दिँदै हल्लिँदै थियो।
गुफाबाट प्लाट प्लाट प्लाट आवज आउँदै थियो, भाइ भित्र बाहिर खेल खेल्दै थियो। उता उनको मुखबाट ऐया दुख्यो झिक्नुसन न लौन मरेनी आमा भन्ने आवज आउदै थियो मेरो भाइ केही प्रवाह नगरी आफ्नो काममा व्यस्त थियो अचम्मको कुरा केही बेर पछी त्यो आवाज आहा…….आ…अ, उम……म….. कति मज्जा, लौ न अझ बढी जोडसँग गर्नुन मेरो राजा… ओ….उ… कति मजा आइरहेको छ… यो दिनको धेरै प्रतीक्षा गर्दै थिएँ भन्नेमा परिवर्तन भयो। यसरी पाँच दस मिनेट भित्र बाहिर गर्दागर्दै मेरो भाइलाई रिङ्गटा लागेछ अनि त्यहि गुफाभित्र सेतो बान्ता गरिदियो। भाइलाई बाहिर निकालेको भाइ त रातै भएछ। खै कसले अनकन्टार गुफामा जाने साहस गरेकोमा भाइलाई रातो रंग लगाइदिएर सम्मानित गरेको रहेछ कि गुफा भित्रनै रंग थियो थाहा भएन तर त्यो रातो रङ गुफाको मुनि रहेको हाम्रो ओछ्यान भरी पनि भएछ। उनले पहिलो पटक कोही गुफामा पुग्न सफल भएको बताइन्। मैले किन भनी सोध्दा उनले “मन परेको मान्छेलाई पो जान अनुमति हुन्छ” भनिन्। र उनल मेरै लागि कसैलाई अनुमति नदिएको बताइन। यसरी मेरो भाइ त्यो रात त्यो गुफाभित्र पाँच पटक गयो र बान्ता गरेर नै फर्कियो। बिहान उज्यालो भएपछि मेरो भाइलाई मैले दरवार भित्रनै पठाइदिएँ। केहि छिनपछी हामी उठ्यौं र उनको बुबु ढाक्ने कुराको आँकुसी मेरो हातले लगायो भने गुफा चाहिँ मनु आफैंले ढाकी। त्यो गुफा भित्र पस्न डराउने हातलाई हेरेको घडीले त ६ बजाई सकेछ। मैले उनलाई “मनु अब म जान्छु है, पछि फेरि भेटौला” भनें। उनले मलाई अङ्गालो मार्न आई र मलाई चुम्बन गरी। मैले फेरि कपडा बाहिरबाटै बुबु माड्दै चुम्बन गर्न थालें। त्यसदिन देखि हाम्रो प्रेम सुरु भयो। हामी आजसम्म पनि समय मिलाउदै भाइलाई गुफामा घुमाउछौं र मनुसँग मेरो बिहे पनि भइसकेको छ।
मनुसँग रातमा भएको रमाइलो चिकाई 2017-05-12T09:37:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: मनुसँग रातमा भएको रमाइलो चिकाई